Kwi-EFF asizenzi izethembiso, siyazibophezela – Malema – LIVE Express
Kwi-EFF asizenzi izethembiso, siyazibophezela – Malema
u-Commander in Chief (CIC) weqembu i-Economic Freedom Fighters (EFF), u-Julius Malema, utshele izinkulungwane zabalandeli namalunga e-EFF ukuthi leli qembu alizenzi izethembiso kodwa liyazibophezela kulokhu elisuke likushilo.
uMalema ubethula inkulumo njengoba leli qembu belethula usomqulu walo wezethembiso zokhetho (manifesto), e-Orlando Stadium, e-Gauteng, ngoMgqibelo.
“Kwi-EFF asizenzi izethembiso. Kwi-EFF siyazinikela ekwenzeni. Futhi noma ngabe ubani obheke izethembiso namhlanje, angeke uze uthole sithembiso esivela kuthina. Ngoba asihambe senza izethembiso. Abaholi boshintsho abazenzi izethembiso, bayazinikela ekwenzeni. Yonke into esiyishoyo sisuke siqinisile futhi siyayenza…ngoba asifuni ukudlala ngabantu bethu kanye nemizwa yabo,” kusho uMalema.
Uchaze i-EFF njengombutho wabantu ikakhulukazi labo abahluphekayo wathi futhi ukubuyiswa komhlaba ngaphandle kwenkokhelo ukuze wabiwe ngokulingana, ukufakwa ngaphansi kukahulumeni kwezimayini namabhange kanye nezinye izinhlaka ezibalulekile zomnotho iyona migomo eyisisekelo ekusungulweni kwaleli qembu. Uthi beyiqembu bazinikele ekutheni bakuzuze lokhu futhi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuze baphumelele. “Yonke into eseyishoyo siqinisile futhi asidlali,” kugcizelela uMalema.
Ube esebonga abantu abangaphezulu kwesigidi (million) ngokuthi bavotele leli qembu okhethweni lukazwelonke ngo-2014 wathi abasoze bazisole ngokufaka leli qembu ephalamende.
Uthi yize noma leli qembu lineminyaka emibili nje kuphela lisephalamende kodwa lincintisana namaqembu akade aba khona futhi benza kangcono kakhulu kunawo.
Uphinde wancoma i-EFF ngokuthi isikwazile ukuthi ishintshe iphalamende ukuthi kube yiphalamende labantu okunokuthi libe yiphalamende leqeqebana labantu abangcono kanjalo nabagcindezeli wathi basaqhubeka kancane kancane nokulishintsha.
Uthi idlanzana labantu abamhlophe alijabuli neze uma libabona begqoke ongiyasebenza ngoba bafuna ukubona iphalamende libukeka ngendlela yase-Britain.
Uphinde wagxeka ubuholi bezwe obuphethe njengamanje ngokuthi abukaze bushintshe lutho selokhu bafika ephalamende wathi namanje basasebenzisa amabhilidi ayesetshenziswa ngesikhathi sobandlululo futhi benza yonke into eyayenziwa abagcindezeli njengokuthi kuthi uma kuvulwa iphalamende kudutshulwe ngezibhamu (21 Gun Salute). Uthi lokhu akuhambisani namasiko ase-Afrika.
Njengenjwayelo leli qembu livule ngeculo lalo ‘lesizwe’, nelicishe lifane nelithi “Nkosi sikelela” kodwa elabo alinayo indlenye ecula ngesibhunu kanti bakubeke kwacaca ukuthi abasoze bayicula njengoba le ngxenye yayiculwa ngabagcindezeli ababebulala abantu abamnyama.